ukugcinwa kweemfihlo, ukuthembeka kunye nokufumaneka
Eyona Ukhuseleko Ukugcinwa kwemfihlo, ukuthembeka kunye nokuFumaneka
Ukugcinwa kwemfihlo, ukuthembeka kunye nokuFumaneka
Ukugcinwa kwemfihlo, ukuthembeka, kunye nokufumaneka, okuhlala kusaziwa njenge-CIA triad, zezona bhloko zokwakha zokhuseleko lolwazi. Esi sithuba sicacisa ikota nganye enemizekelo.
Naluphi na uhlaselo lwenkqubo yolwazi luya kunciphisa enye, ezimbini, okanye zontathu ezi zinto. Ngokusekwe ekubeni leliphi na kula macandelo lisengozini enkulu, ulawulo olusebenzayo lokhuseleko lunokuyilwa ngokufanelekileyo.
Ngamagama alula, ukugcinwa kwemfihlo kuthetha into eyimfihlo kwaye ayifanelanga ukuba ichazwe kubantu okanye kwiziko elingalindelekanga.
Ukugcinwa kwemfihlo kukuqinisekisa ukuba ulwazi olubuthathaka lufikelela kuphela kumntu ogunyazisiweyo kwaye lugcinwe kude kwabo bangagunyaziswanga ukuba babenalo.
Wonke umntu unolwazi afuna ukulugcina luyimfihlo. Kungoko ukukhusela olo lwazi yinxalenye ebalulekileyo yokhuseleko lolwazi.
Imizekelo yolwazi oluyimfihlo
Iingxelo ze-akhawunti yebhanki
Iinombolo zekhadi letyala
Kwimeko apho ubumfihlo butyeshelwe, oko kunokubangela ukufikelela okungagunyaziswanga kulwazi lomntu okanye kude kuphulukane nobumfihlo!
Imizekelo yokuhlaselwa okuchaphazela ukugcinwa kwemfihlo
Iindlela zokuqinisekisa ukugcinwa kwemfihlo
Amagama abasebenzisi kunye neephasiwedi
Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini
Iimpawu zokhuseleko okanye iifobs eziphambili
Kwimeko yokhuseleko lolwazi (i-InfoSec), ukuthembeka kuthetha ukuba xa umthumeli ethumela idatha, umamkeli kufuneka afumane idatha efanayo nale ithunyelwe ngulo mthumeli.
Idatha mayingatshintshwa xa usendleleni. Umzekelo, ukuba umntu uthumela umyalezo 'Molo!', Umamkeli kufuneka afumane u 'Molo!' Oko kukuthi, kufanele ukuba ibe yile datha ngokuchanekileyo njengoko ithunyelwe ngumthumeli. Nakuphi na ukongezwa okanye ukukhutshwa kwedatha ngexesha lokuhamba kuya kuthetha ukuba ukuthembeka kusengozini.
Umzekelo uhlaselo oluchaphazela ukuthembeka
Ukuhlaselwa komntu phakathi (MITM)
Ukufumaneka kuthetha ukuba ulwazi luyafumaneka kumaqela agunyazisiweyo naninina xa kufuneka njalo. Ukungafumaneki kwedatha kunye neenkqubo kunokuba neziphumo ezibi.
Kubalulekile ukuba nezicwangciso kunye neenkqubo ezikhoyo zokuthintela okanye ukunciphisa ukulahleka kwedatha ngenxa yentlekele. Isicwangciso sokubuyiselwa kwentlekele kufuneka sibandakanye izehlo ezingalindelekanga ezinjengeentlekele zendalo kunye nomlilo.
Umsebenzi oqhelekileyo wokulondoloza uyacetyiswa ukwenzela ukuthintela okanye ukunciphisa ukulahleka kwedatha ngokupheleleyo kwiimeko ezinjalo.
Kwakhona, izixhobo ezongezelelekileyo zokhuseleko okanye isoftware enjengee-firewall kunye neeseva zommeleli zinokukhusela ixesha lokuphumla kunye nedatha engafikelelekiyo ngenxa yezenzo ezinobungozi ezinje ngokukhanyela inkonzo (i-DoS) kunye nohlaselo lwenethiwekhi.
Umzekelo uhlaselo oluchaphazela ukuFumaneka
Uhlaselo lwe-DoS kunye ne-DDoS
Uhlaselo lomkhukula lwe-SYN
Uhlaselo lomzimba kwiziseko zophuhliso
ezona meko ze-lg v20
Java guqula imephu iye kuJson
Isivumelwano: thenga iMoto Moto X yoHlelo oluSulungekileyo, fumana iMoto 360 yeMidlalo mahala
Iimpawu ezifihliweyo ze-iOS 14: Impompo yasemva, ukuqondwa kwesandi
Eyona ndlela ifanelekileyo yeTshayina ii-smartphones ze-Android kwi2021
Eyona ndawo ithengwayo ye-4 kaJulayi yokuthengisa amatyala amnandi kwi-iPhone 8 nakwi-iPhone 8 Plus
I-Apple iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus (7s, 7s Plus) kunye nomhla wokukhutshwa
I-Samsung Galaxy S20 FE: Unboxing kunye neZandla-kwi
IWalmart kunye neeapos zentengiso yeCyber ​​yangoMvulo inezivumelwano kwi-iPhone 8 nakwi-iPhone 8 Plus
Nantsi iapos kutheni i-OnePlus 8 Pro ixabisa kakhulu, kwaye isantya sayo se-5G kwiT-Mobile ibetha i-Samsung